Marka ay timaado in ay masawirada deg dega ah, camera ugu fiican waa mid ka mid ah aad qabto in aad mar walba sida aad camera smartphone. Casriga maalmahan qaadaan kaamirooyinka ugu fiican iyaga iyo had iyo jeer waa soo dhow yahay. Imaatinka macruufka qalabka waxaa naga badan codsiyada macruufka ah ee, iPhone iPad, iPod iyo taabashada si ay ugu adeegaan kasta oo ujeeddo iyo marka ay timaado helaan sawirada, iCloud ugu fiican by Apple madal. Waxaad heli kartaa sawiro aad online mar kasta waxaad u Mac ama Windows computer ama aad iPhone, iPad ama iPod Touch. iCloud kaliya waa ikhtiyaarka ugu fiican la heli karo si ay u helaan sawiro aad. Waxaad si fudud u baahan ID Apple ah iyo internet-ka oo aad samaysay! Helitaanka sawiro ka iCloud waa iska sahlan, oo waxaa jira qaar ka mid ah siyaabaha ay u sameeyaan isla. Maqaalkani waxa uu ku tusaysaa sida si ay u helaan sawiro ka iCloud afar siyaabood oo fudud.
1. Isticmaalka Apple macruufka Devices
Tallaabada 1 Si photos helaan isticmaalaya qalabka Apple macruufka in aad marka hore u baahan tahay inaad "Settings" furo ka screen guriga ee qalabka macruufka ka dibna tubbada "iCloud." Tubada "On / Off" in ay noqon iCloud ON iyo geli ID Apple aad xaqiijin. Shid Stream Photo ah si aad u aragto sawiro in iCloud iyo in aad sawirrada ka aragto wadaagaan dadka aad la - Daar Wadaago Photo durdurro.
Tallaabada 2 Next tallaabo waa in aan bilowno "ayuu Photos" app ka screen guriga. Waxaad arki doonaan "Photo Stream" button shaashadda. Tubada waxa ku inaan billowno Photo Stream.
Tubada on "My Photo Stream" si aad u aragto sawiro aad uploaded iyo haddii qof kale ayaa sidoo kale la wadaago ay Photo Stream idinla, waxaa laga heli doonaa shaashadda.
Habka sahlan oo gaaban
2. Isticmaalka PC ah
Tallaabada 1 : Si aad u isticmaasho iCloud aad Windows Computer, in aad marka hore u baahan tahay si ay u rakibi. Sidaas Download hore iyo rakibi iCloud for Windows.
Talaabada 2 : Marka aad samaysay rakibidda iCloud ah, abuurtaan iCloud Control Panel for Windows oo geli User ID xaqiijin Apple iyo password. Waxaad u abuuri kartaa ID keliya haddii aad leedahay ah qalab Apple macruufka ama Mac OS X la Libaaxa ama ka dib. Waxaad u baahan tahay ID Apple ah si ay u isticmaalaan iCloud.
Tallaabo 3 : Ka dib markii galo user id iyo password, guji "Photo" sanduuqa si ay awood Photo shaashadda. Guji "Options" button in la doorto ikhtiyaarka Photo Stream. Ha iloobin in aad awood u ikhtiyaarka Wadaago Photo durdurro si ay u arkaan sawirada ay wadaagaan dadka kale ee aad la.
Si fudud u hagaagsan xogta aad kombiyuutarka.
Mid ka mid ah meel loogu talagalay dhammaan xogta.
3. Isticmaalka Mac ah
Tallaabada 1 : Marka hore, dooro "rabtid System" ka menu Apple ku saabsan Mac ka dibna riix "iCloud." Guji "Photo Stream" checkbox shaashadda oo guji "Options" si loo hubiyo in ay "Photo Stream" iyo "La Wadaago Photo durdurro" ayaa labadaba karti.
Talaabada 2 : Hadda waa wakhtigii ay u bilowdo mid ka mid iPhoto ama Aperture. Guji "iPhoto" ama "Aperture" sare ee shaashadda oo dooro "Waxa aad rabtid." Hadda, riix "Photo Stream" tab iyo doorto ikhtiyaarka ah "Photo Stream" iyo "La Wadaago Photo Stream."
Talaabada 3 : Si aad u aragto sawiro Photo Stream, dooro "Photo Stream" ka furmo suuqa ugu weyn ee labada iPhoto ama Aperture oo mar baad u qaybiyay.
Easy in ay u hagaagsan xogta
iCloud ma aha syncing file kii saaxir dhamaystiran laakiin weyn marka ay timaaddo in la sawiro wareejinta
4. Isticmaalka Wondershare Dr. Fone ee macruufka si ay u helaan sawiro tirtiray
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka (iPhone Data Recovery) waa xal kabashada xog dhamaystiran oo ah laga helo suuqa. Hadda si fudud u soo kabsado xogta aad lumay si toos ah uga qalabka macruufka ama dib u helidda hayaan ka iCloud ama Lugood. Waa mid aad u socon la macruufka dambeeyay 9, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPad Air 2 iyo in ka badan. Aan fahmaan sida waxa loo isticmaali karaa in ay dib u soo ceshano files kaga imaanayo iCloud.
Tallaabada 1. Dooro Recovery Mode
Run Wondershare Dr.Fone ee macruufka iyo dooran hab dib u soo kabashada ee "soo kabsado iCloud ee kaabta faylasha" ka sareysa. Dariishad cusub ka soo muuqan doonaa oo wuxuu soo geli xisaabtaada iCloud iyo password in ay gasho. Macluumaadkaaga waxaa aadka u xaqiijisatay iyo diiwaan gelin waa lagu hayaa by Wondershare.
Tallaabada 2. Download kaabta iCloud File
Marka aad login iCloud, barnaamijka awood u yeelan doonaan in la helo oo dhan iCloud files gurmad in aad xisaabta. Ka dooro mid ka mid ah meesha aad rabto in aad soo kabsado xogta iyo riix "Download" button.
Daaqadda pop-up ka, waxaad dooran kartaa nooca faylasha aad jeclaan lahayd inaad kala soo baxdo. Tani waxay badbaadin doontaa markii ugu duuban ee gurmad iCloud faylka. Markaas iskaan karaa content iCloud ah. Guji "Scan" badhanka si loo bilaabo nidaamka iyo ha waxoogaa ku qaadano si loo dhamaystiro hawsha.
Talaabada 3: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta aad ka iCloud File kaabta
Marka scan la dhammeeyo, waxaad ku eegaan kartaa ku dhowaad dhammaan xogta ku jiraan xiriiro, fariimaha, sawiro, iyo in ka badan in gurmad iCloud faylka. Hubi oo sax shayga aad rabto iyo guji "Ladnaansho badhanka" iyaga badbaadiya on your computer. Your xiriirada, fariimaha, iyo qoraallada la soo kabsaday doonaa macruufka qalab si toos ah aad iPhone, iPad ama iPod xiriiri haddii ay ku xiran yihiin your computer. Connect iDevices aad la cable USB ah inta ay socoto dib u soo kabashada.
iCloud Contact Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada ka iCloud
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iCloud in Android
> Resource > iCloud > Afar siyaabo fudud si ay u helaan sawiro iCloud